OwamaProtea umiselwe ukusebenzisa izikhuthazi
UZUBAYR Hamza, umdlali wamaProtea umisiwe izinyanga eziyisishiyagalolunye engazihlanganisi nekhilikithi ngenxa yokutholakala kwezikhuthazi ezingadingakali egazini lakhe Isithombe: BACKPAGEPIX
INHLANGANO ephethe ikhilikithi emhlabeni, i-International Cricket Council (ICC) imemezele ukuthi umdlali wakuleli, uZubayr Hamza umisiwe kuyo yonke into ehlangene nekhilikithi izinyanga eziyisishiyagalolunye.
Lesi simemezelo sikhishwe ngoLwesithathu.
Lo mdlali oneminyaka engu-26 ubudala, uvumile ukuthi wephule umthetho ophikisana nokusebenzisa izikhuthazi ezingekho emthethweni ngaphansi kwe-ICC Anti-Doping Code.
Isampula eyathathwa kuyena ngoJanuwari 17 nonyaka ePaarl, yahlolwa yatholakala ukuthi ine-Furosemide, esohlwini lwemithi engavumelekile.
Ulivumile icala wabe esemiswa izinyanga eziyisishiyagalolunye. Isigwebo sakhe siqale ngoMashi 22, nokuyilapho lo mdlali asamukela khona ngokusemthethweni. Lokhu kuchaza ukuthi uzobe esekulungele ukubuyela kwezekhilikithi ngasekupheleni konyaka ngoDisemba 22.
"I-ICC izibophezele ekugcineni ikhilikithi ihlanzekile futhi ayikubekezeleli nhlobo ukusetshenziswa kwezinto ezingavumelekile," kusho oyisikhulu sophiko lobuqotho kwi-ICC, u-Alex Marshall esitatimendeni.
“Kuyisikhumbuzo futhi nakubo bonke abadlali bekhilikithi bamazwe ngamazwe ukuthi bahlale bezigadile izinto abazifaka emizimbeni yabo.
“Kumele bazi kahle ukuthi iyiphi imithi abayidlayo ukuze baqinisekise ukuthi ayinazo izinto ezingavumelekile ezingadala ukuthi bephule imithetho elwisana nokusetshenziswa kwezikhuthazi kwezemidlalo.”
Konke okwenziwe nguHamza emidlalweni abegijima kuyona kusukela ngoJanuwari 17 kuze kube uMashi 22, kuzosuswa emarekhodini akhe kodwa imiphumela yamaqembu abewadlalela, ngeke ishintshe.
Udlale kumaProtea okokuqala kowe-test bebhekene nePakistan ngo-2019, wabonakala okokuqala kowosuku olulodwa bedlala neNetherlands ngo-2021. Sekukonke usedlale imidlalo ye-test eyisithupha nowodwa wosuku olulodwa eqenjini lesizwe.